दाईलाई मा’रे, न्याय माग्दा सबै मिलेर घर घेर्दैछन्, अब बाबा-आमालाई कसरी बचाउने भन्दै दिदीबहिनी… ? (भिडियो) – Tufan Media News
१५ श्रावण २०७८, शुक्रबार २१:०७
काठमाडौ । वर्ष ३० का विदुर विक्रम कुँवरको रहस्यमयी निधनका कारण गुल्मीमा तरंग उत्पन्न भएको छ । उनका बहिनीहरुले घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । गुल्मी इश्मा गाउँपालिका ५ मा भएको यो घटनामा युवकले देह त्याग भएको भनिए पनि परिवारका सदस्यले संकास्पद भनेका छन् । आफ्ना दाई जो संग दिनभरी क्यारेम खेल्न गएका उनीहरुले वास्ता नगरेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् ।
उनीसंगै ४ वर्षका छोरा पनि थिए । ति साना छोरा हातमा चिजवल बोकेर रुँदै घर आएका थिए । परिवारका सदस्यले विदुरका साथी टिकारामले हामी रातीसम्म क्यारेम खेलेका थियौं उनी घर हिँडेका हुन् भनेर भनेका थिए । त्यो राती विदुर घर नआएपछि आमा खोज्न जाँदा अरु साथीहरु वेवास्ता गर्दै क्यारेम खेलीरहेका थिए । आमा विदुरलाई खोज्दै जाँदा पनि ति साथीहरुले कुनै वास्ता नगरेको बहिनीको भनाई छ ।
भोलीपल्ट खोज्न जाँदा पनि उनीहरु खेली रहेका थिए । आमा खोज्न गएर फर्किदा छोरा नभेटेर रुँदै फर्कदा पनि ति साथीले किन रुनुभयो आमा ? भनेर समेत सोधेनन् । तर केही वेरमा उनी भिरमा मृ त अवस्थामा फेला परे । उनको श रि रमा निलडाम देखिएको छ भने घटनास्थलमा र ग त भने देखिएको छैन ।
संगै क्यारेम खेलेका साथीहरुले अनौठो ब्यवहार देखाउनु परिवारका सदस्यले शंका गरेका छन् । दिनदिनै संगै खेल्ने साथी हराउँदा साथीलाई अलिकति पनि पिर लाग्दैन र ? बहिनी भन्छिन् । प्रहरीले मिडियामा यो कुरा वाहिर नल्याउनु भनेका कारण अहिले सम्म आफुहरु चुप लागेको बहिनीको भनाई छ ।
परिवारका सदस्यले विदुरसंग क्यारेम खेल्नेहरु माथि छानविन गर्न माग गरेका छन् । परिवारले कि टा नी जा हेरी दिन खोज्दा पनि प्रहरीले रोकेको थियो । अहिले दिन खोज्दा ढिलो भैसक्यो भनेपछि परिवारका सदस्य मिडियामा आएको बताएका छन् ।